Kutheni le nto siYithiyile imisebenzi yethu, abanelisekanga bubomi kwaye abanako ukonwaba - Ezintsha
Eyona Ezintsha Sucks Work: Kutheni le nto siYithiyile imisebenzi yethu kwaye singekhe sonwabe
Sucks Work: Kutheni le nto siYithiyile imisebenzi yethu kwaye singekhe sonwabe
Konke kwanele ukudakumba nkqu nenqanaba eliphambili lomntu.(Ifoto: YouTube / Space Space)
Inkcazo yokuphumelela yinto elula kwaye ethe ngqo. Ngokwesichazi-magama, impumelelo yile:
isiphumo esihle sento ethile
ukufumana ubutyebi, udumo, njl
isenzo, ukusebenza, njl.njl
umntu okanye into ephumeleleyo
Ngamanye amagama, impumelelo sisiphumo. Ukuqaliswa kwencwadi kunokuba yimpumelelo, ukucoceka kunye nejerk kunokuba yimpumelelo, ipati ingaba yimpumelelo. Impumelelo yile, njengoko inani lokuqala lisitsho, sisiphumo esihle sento ethile. Ngelishwa, eli gama ligqwethiwe kutshanje kwibinzana, ukuba uphumelele , kwaye siyakubona oku kwinkcazo yesibini neyesine. Oku kuthetha ukuba impumelelo ayisachazi siphumo, kodwa imeko yobume, ephakamisa zonke iintlobo zemibuzo:
Ukuba ishishini liyaphumelela ishumi leminyaka kwaye lineminyaka embalwa ngenzuzo enciphayo, ngaba ngequbuliso ayiphumelelanga?
Ngaba umntu kufuneka aqhubeke nokufezekisa izinto rhoqo ukuze athathwe njengempumelelo?
Ngeliphi ixesha umntu anokuthathwa njengemvumi ephumeleleyo? Ngaba kufuneka badlale iigigs rhoqo ngemali efanelekileyo kwiibhari, ngaba banesivumelwano sokurekhoda, ngaba kufuneka baphumelele ibhaso?
Ukuba ndibethwe ngumoya omnye, ngaba oko kundenza ukuba ndibe ngumculi ophumeleleyo, okanye ngaba yinto nje yempuku?
Ungazibona iingxaki ezivelayo xa uthatha impumelelo kwisiphumo ukuya kwimeko yobume. Ngoku yonke isemehlweni ombonayo, okanye osasazo, okanye uluntu, okanye nawuphina umntu ofuna ukulinganisa. Masijongane nayo: Kwininzi labemi, impumelelo yehla nokuba yimalini umntu ayenzayo emsebenzini wakhe. kunye / okanye nokuba bangakanani amandla abawasebenzisileyo. Akukho mntu uza kujonga kumongikazi othandwayo nohlonitshwayo kwaye athi baphumelele kunoDonald Trump, nokuba wenza kakubi kangakanani okanye ukuba ufumana ubuhlanga kangakanani.
Nokuba ithini na inkcazo yokuba 'yimpumelelo', iphantse yalinganiswa ngokuthelekiswa nabanye abantu. Ayinakuphelela.
Ukuba sijonga emva kwinkulungwane nje kuphela, nangona kunjalo, siyabona ukuba umxholo we ukuba nempumelelo ngumbono ongaqhelekanga. Abantu abaphezulu kuluntu, abaziwa njengemali yakudala babonwa njengabona bantu badumileyo kwaye ke ngabantu abalungileyo. Kwakungakhathali ukuba ubutyebi babo babuzuzwe njengelifa, yayiyinto yokuba babekhulele ebutyebini kwaye ke bayazi ukuba mabaziphathe njani kwaye baziphathe ngendlela efanelekileyo. Zange zithathwa njengempumelelo, nangona kunjalo - umbono onjalo wawungekho ngelo xesha. Babonwa nje ngokuba ubukhosi obudala baseYurophu babungcono: ungcono kunabo bonke abanye abantu.
Kwelinye icala, imali entsha-abantu ababezuze ngokwenyani ukuya phezulu-bajongwa baphantsi yimali endala kwaye babonwa njengangaphantsi kwabo. Okwangoku ngoothixo bethu ngenkulungwane yama-21 yobungxowankulu; abo bazenzele amadoda abakwaziyo ukuba zizityebi ngohlobo lwabo lweshishini nokusebenza nzima. Ngeli xesha nangona, ngekhe bathathwe njengabaphumeleleyo (kwakhona, yayingeyiyo eyona nto yayiyiyo emva). Babejongelwa phantsi kuba kwakufuneka bezenzele eyabo imali.
Kuyathakazelisa ukuqaphela ukuba nokuba ithini inkcazo yokuphumelela, inokuba iphantse ilinganiswe ngokuthelekisa abanye abantu. Ayinakuphelela. Ayinamsebenzi kangako into yokuba umntu abe nenkululeko epheleleyo yemali ene- $ 60k yengeniso ngonyaka, abe nolwalamano olusondeleyo, nolwanelisekayo kwaye onwabe ngokungaqhelekanga. Oko ngekhe kuthathwe njengempumelelo. Kungenxa yokuba uthelekiswa noozigidigidi abangamakhoboka okungaze bazibone iintsapho zabo kwaye banobudlelwane obunentsingiselo. Silinganisela impumelelo ngezinto ezibonakalayo ezifana nemali, ngaphandle kokujonga imbono yomntu ngobomi.
Ukuba nemali, iwonga okanye zombini kumaxesha anamhlanje kubangela ukuba umntu abonakale engcono kunaye wonke umntu. Ayinamsebenzi kangako ukuba obu butyebi okanye ubume bufunyenwe njani (cinga uKim Kardashian) -kuba kunjalo. Nje ukuba umntu abe yinxalenye yale klabhu bayahlonitshwa ngabakumgangatho ophakathi kwaye bajonge phezulu njengoothixo abathi ngandlela ithile bakhethe oko bakufumeneyo. Zibanjiwe njengenkcazo yempumelelo, kuba kwinkcubeko ethe phithi kukuthenga abathengi ngabantu abanako ukusebenzisa kakhulu. Kananjalo, amazwi abo abaluleke kakhulu kwaye amanyelwa, kuba silinganisa ubutyebi nexabiso.
Ngaphambi kobudala bemizi-mveliso, isikhululo somntu ebomini sasithathwa njengesiphumo sobuThixo. Inkolo yayalela ukuba ukuba utata wakho wayengumbhaki ngoko yayilicebo likaThixo elo kuwe ngokunjalo. Udidi olulawulayo lwathoba kwaye lukhutshiwe, kwajongwa kubo ngcono kuba bazalelwe kwisikhundla sabo, oko kuthetha ukuba babelawula ngelungelo elingcwele elaligxininiswe ngakumbi ngabefundisi. Babengabathengi bakho kwaye uyamkele le nyaniso. Awuzange unqwenele ukufana nabo okanye unqwenele oko babenako, kuba iingcinga ezinjalo ngelo xesha zazingenangqondo. Ukuba uThixo wayefuna ukuba ubenayo, ngewayekwenzile ukuba ube yinkosana kunonyana wombhaki.
Uluvo lokuba impumelelo yomsebenzi luza kubuvila okanye ukusebenza nzima kuyonakalisa kakhulu kuye nabani na ongahlali phezulu.
Iya kuba sengqiqweni ke into yokuba kwihlabathi lanamhlanje, apho iingcinga zonqulo ezinjalo zicingelwa nangabalandeli bazo njengezihlekisayo, ukuba siza kuba nembono eyahlukileyo. Kuya kufuneka sikwazi ukujonga ngokungenachaphaza kuzo zonke izizathu zokuba umntu afikelele kwinqanaba elithile kwinqanaba lekhondo lomsebenzi; zeziphi izibonelelo ezibancedileyo ukuba baqhubele phambili ngokukhawuleza okanye zeziphi iziphene ezibabuyisele umva. Kuya kuba sengqiqweni ukucinga ukuba umntu ovela kwiqela elincinci oye wakhula enomzali omnye kwintlalontle unezinto ezininzi ezingalunganga xa kufikwa apho baya kuphelela khona emsebenzini wabo. Inqanaba labo lempumelelo kunye nolwaneliseko luya kwahluka kakhulu emntwini kwisininzi esinabazali ababeka ixesha kunye nemali ebalulekileyo kwimfundo yabo kunye notshintsho baye emsebenzini.
Ngelishwa, inani elikhulu labemi-endaweni yokuqonda ukuba umntu ovela kwiqela elincinci unokufuna uncedo ukuze afumane isayikholojikhthi elungileyo ukuze aphumelele kwikhondo lomsebenzi-baya kuthi endaweni yabo batshintshe imeko yabo iye kwenye into: ubuvila.
Ngelixa kulula ukuqaphela ukuba umbono weenjongo zikaThixo kwisikhululo sethu sobomi uyahlekisa, umbono wokuba impumelelo yomsebenzi uza kubuvila bomntu ngamnye okanye ukusebenza nzima kunzima ngakumbi kwaye kuyonakalisa kakhulu kuye nabani na ongahlali phezulu. Ngoku ayisiyiyo nje ukuba unethamsanqa okanye ungathandwa nguThixo-kunjalo eyakho impazamo. Iinkokheli zeshishini kunye noosomashishini bahlala bexhasa ukuba eyona nto ibalulekileyo ekuphakameni kwabo yayikukuba basebenze nzima. Oku akuthandabuzeki - umntu akayakhi ishishini okanye ayenze kwisikhundla se-CEO ngaphandle kokufaka umzamo omkhulu.
Ngelishwa, kubo bonke abantu abasebenzayo, oku kuthetha ukuba abekho phezulu ngenxa yokuba bengakhange basebenze ngokwaneleyo. Zisoloko zikhankanywa ezinye izithako ezenza inqanaba lempumelelo. Ngokuqinisekileyo ukuba umsebenzi onzima ulingana nomgubo xa ubhaka ikeyiki, sinezinto ezifana neswekile, amaqanda namanzi ngohlobo lwethamsanqa, unxibelelwano, ixesha kunye neengcebiso ezifanelekileyo okanye ukucebisa. Ezi zinto aziyonto nje engenamsebenzi umsebenzi onzima onokuzoyisa, zibalulekile. Ukuya kwizikolo ezifanelekileyo, ukuba nabazali abafanelekileyo, nokuba kwindawo elungileyo ngexesha elifanelekileyo (njengeSilicon Valley ngexesha lobuchwephesha bezobuchwephesha) banefuthe elikhulu kwinqanaba lokuphumelela ikhondo lomsebenzi onokulindelwa.
Sifanele sikujonge ngenye indlela oku: cinga uxelele umsebenzi oxinezelekileyo obeka iiyure ezili-10 ukuya kwezili-12 ngeentsuku ezingama-50ka zeedola ukuba akasebenzi ngokwaneleyo, nokuba ukwimivuzo ephantsi kuba akenzi njalo ' sebenza nzima njengabo bangaphezulu kwakhe. Nabani na one-ounce yengqondo uyabona ukuba obu bububhanxa obukhulu, kodwa ibe yingxelo yongxowankulu. Isikhundla somntu wonke ngoku ebomini kubonakala ngokusekwe kuphela kwindlela asebenze nzima ngayo loo mntu kwaye kufanelekile ukuba abekhona. Ukuba awutyebi okanye unamandla, awuphumelelanga. Kwaye ukuba awuphumelelanga, kungenxa yokuba khange usebenze nzima ngokwaneleyo, khange ube nezinto ezintsha ngokwaneleyo, awukwenzi ngokwaneleyo.
Ipesenti enye efana noSam Zell bade batsho kutshanje ukuba akufuneki batshutshiswe kuba basebenza nje nzima kunaye wonke umntu. Ngelishwa, abaninzi phezulu bakhulisa ingxelo ezintlokweni zabo ukuba inqanaba labo lempumelelo lixhomekeke ekusebenzeni nzima kwabo, ukuba bakhethekile ngandlela thile kwaye wonke umntu wonqena. Kunqabile ukuva usozigidi okanye umgidi-gidi eqonda izibonelelo abanokuthi babenazo ekukhuleni, izinto ezihambe ngendlela yabo ngexesha elifanelekileyo okanye into abakwaziyo ukuyisebenzisa bakube befumene amandla amancinci akhawulezisa ukunyuka kwabo.
Konke kwanele ukudakumba nkqu nenqanaba eliphambili lomntu.
Siye safumana imeko yentsholongwane esiya kuyo, apho sihlala silindele ukonwaba kwaye saneliseke xa sihlangabezana nomyinge olandelayo.
Kuthekani ukuba siqale ukujonga impumelelo kwikhondo lomsebenzi ngokusebenzisa iilensi zokonwaba, ukoneliseka ngumsebenzi kunye negalelo eluntwini nasentlalweni? Uninzi lwabantu esijonge kubo njengabaphumeleleyo ngequbuliso luza kucingelwa njengesiqhelo kwaye lubangele umona omncinci. Umbutho awuthathi nto ukuba abongikazi (umzekelo) bayaphumelela, kodwa umgangatho womsebenzi wabo kunye nokhathalelo abalunikezelayo yinkonzo ebalulekileyo kuye nabani na osesibhedlele. Akukho mntu wakhe wabuza ikhondo lomsebenzi okanye iingcebiso ngobomi kumntu osebenza umsebenzi ophakathi wokuhlawula, ngaphandle kwento abanokuthi babonakalise ubuhlakani obuqhelekileyo bokuphila ubomi obulula, obunoxolo nobonelisayo.
Hayi, sijonge kwizityebi — kubantu abenze ukuba bafikelele encotsheni yemfumba — ukuba basixelele ukuba singafana njani nabo kuba sicinga ukuba bangcono kunathi kwaye bonwabile kunathi.
Kukangaphi apho unengxaki khona ngeCawa ngokuhlwa? Sonke siye saba nenye ngexesha okanye kwenye; kwabanye bambalwa kwaye bakude kakhulu, kuninzi bahlala beqhelekile. Umsebenzi yinxalenye enkulu nebalulekileyo yobomi bethu, oku ngaphandle kwamathandabuzo konke konke. Xa sichitha iiyure eziyi-8 nangaphezulu ngosuku ukongeza kwiintsuku ezintlanu kwezi zisixhenxe ngeveki, leyo sisiqwengana esikhulu sexesha lethu-ke xa sikumsebenzi ombi kubaluleke kakhulu ukuba siphume kuwo ngokukhawuleza njengoko sinakho.
Oko kwathethi, uluntu ngokubanzi lujonga emsebenzini ngendlela engeyiyo kuninzi lwexesha. Sithi asiqhubeki ngokukhawuleza ngokwaneleyo, asihlawulwa ngokwaneleyo, asimthandi umphathi wethu, uhambo lwethu lude kakhulu. Xa singonwabanga sijonga zonke izinto ezingalunganga zomsebenzi kunye nomsebenzi wethu, ukuqinisa ukungonwabi kwethu kunye nokuqhubela phambili umjikelo. Thina eNtshona sinemeko yesifo esasiya kuyo, apho sihlala silindele ukonwaba kwaye sanelisekile xa sihlangabezana nesigaba esilandelayo. Ewe ukuba sinembono enjalo, siza kuphefumla ixhala lokucinga ukuba inqanaba elilandelayo lingaba lide, ngenxa yoko asinakonwaba okwangoku.
Wena ngokwakho ngekhe ungazi nokuba kutheni, kodwa ufunde uluhlu olwaneleyo lokuba ungaphumelela njani ukukholelwa ukuba yile nto uyifunayo.
Asifundiswanga nangubani na ebomini bethu-nokuba ngootitshala bethu, abazali okanye amanye amagunya-ukujonga izinto ezintle emsebenzini wethu nakubomi bethu. Isisombululo esisinikiweyo sihlala silula: ukuba awuthandi umsebenzi wakho, yeka.
Le ngcebiso ayinantsingiselo, kuba iyayityeshela eyona psychology icwangciswe kuthi malunga nomsebenzi kunye nobomi kwindawo yokuqala.
Rhoqo, ayingomsebenzi wethu ukuba siwuthiyile-kukuswela kwethu ukuqhubela phambili kunye nenqanaba lethu lobume. Kungenxa yokuba, ukongeza kubuchwephesha bendawo esiya kuyo, sikulungele ukuhlala sizithelekisa nawo wonke umntu, oko kuthetha ukuba sihlala sibona izinto esingenazo kwaye sithathe omnye umntu, ngenxa yokuba sinazo izinto esingenazo , wonwabile kunathi. Asikaze sifundiswe ukuba kufuneka siye kukhangela okuhle kwimisebenzi yethu, kumakhondo ethu kunye nakubomi bethu.
Hayi.Yindlela yeNtshona yokujonga zonke izinto esizenzayo sukuyenza Sinayo, ke ngoko ayimangalisi into yokuba sizive sihlupheka ngonaphakade kwaye silusizi.
Ukususela kumncinci kakhulu, sifunda ukuba singathethi nendlovu egumbini: ukuba sonke siza kufa ngenye imini. Nokuba siyaloyisa ihlabathi asinakulithatha, kwaye xa siyifumanisa le nyaniso, iingcinga zamandla, ubutyebi kunye nokuqhubela phambili kwinqanaba lokudibana ngokukhawuleza ziqala ukuba mfiliba xa kuthelekiswa nomnqweno wokonwaba noxolo. Rhoqo sijonga loo mbono (ulonwabo kunye noxolo) njengothileyo, ukuba sisizinda sabalimi abonwabileyo abangazi ngcono. Ngokuqinisekileyo sikrelekrele ngakumbi, sihlala kwihlabathi elinzima ngakumbi kwaye sinezinto ezinkulu zokucinga ngazo. Xa sineenkohliso zobungangamsha kunye nokuzenzisa ngathi siyinto engaphaya kwabantu abangaphantsi kwethu, kubalulekile ukuba sibuyele emva siqwalasele la manqaku siwabonayo evela amaxesha ngamaxesha kukuzisola kwabafayo. Umxholo oqhelekileyo kukuba bachitha ixesha elininzi besebenza, ixesha elininzi bexhalabile ngenkqubela phambili yomsebenzi kunye nezinto ezingabalulekanga kwisikimu esikhulu sezinto. Kwabaninzi, kude kube sekufeni apho baqonda ukuba uxinzelelo lwabo malunga nomsebenzi kunye nenqanaba yayiyinkcitha-xesha yabo, eyintlekele.
Oku kusebenza njengesikhumbuzo esiqinisekileyo sokuba into esiyixabisayo ayisiyiyo le nto siyiyo kufanele ixabiso. Xa sinobomi obunye kuphela-sinesithuba esifutshane seminyaka engama-80, ukuba sinethamsanqa-ukonwaba ngequbuliso kubaluleke kakhulu. Ingxaki kukuba sifundisiwe kwaye sinikwe imeko yokukholelwa ukuba kufuneka sibonakalise abanye abantu ngesimo sethu, kwaye oku kuya kusenza sonwabe ukongeza kuzo zonke izinto esinokuzithenga. Kufuneka sifumane imali eninzi kwaye sibe namandla amaninzi ukuze sihlonitshwe kwaye sicingelwe ngabantu.
Umbuzo ngulo, ngabaphi abantu?
Abahlobo bethu kunqabile ukuba bazikhathalele izinto ezinjalo, kuba ubukhulu becala ubuhlobo bethu obunzulu abunanto yakwenza nomsebenzi wethu. Iintsapho zethu zihlala (kwaye kufuneka zihlala zisithanda) ngenxa yento esiyiyo, hayi esikwenzayo. Ngelishwa abazali abaninzi bawela kumgibe wokufuna ukuba abantwana babo baphumelele ekunyuseni iwonga labo. Ndakhe ndabava ngaphambili-phantse bephefumla ixhala kwinto yokuba uJohnny omncinci sele eneminyaka eyi-18 kwaye yena nangoku akazi ukuba makenze ntoni ngobomi bakhe. Kuyihlazo ukuba umntu ova nje into ayithethayo angayibona indlela ahlekisa ngayo umama kodwa akakwazi.
Ukuba uthe phithi kukuphumelela, ndinomdla wokwazi ukuba kutheni. Ngaba kungenxa yokuba ufuna ukuhlonitshwa? Ngaba kungenxa yokuba ufuna iwonga? Ubutyebi? Uzuko lokuba phezulu? Amandla? Ndiza kubheja ukuba ngokwakho ngekhe ungazi nokuba kutheni, kodwa ufunde amaphephancwadi aneleyo, uluhlu lwezinto ezinokuthi ziphumelele kwaye zilungiselelwe ngokwaneleyo ngamajelo eendaba ukuba ukholelwe ukuba yile nto uyifunayo. Kubantu abaninzi, kuthatha ubomi babo bonke ukuqonda ukuba bachitha ixesha labo beleqa izinto ezithengisiweyo okanye ezifakwe kubo.
Kuza kuba yintoni kuwe?
UPeter Ross uyayila kwakhona i-psychology kunye nefilosofi yehlabathi leshishini, imisebenzi kunye nobomi bemihla ngemihla. Ungamlandela kwi-Twitter @prometheandrive.
UColin Powell ulungile: I-Birtherism yi-Racism
'I-Orenji nguMnyama oMtsha' Rhoqo: Isiqendu 1
UCarlos Slim Ufuna i-80 yezigidi zeedola ukuze aHobe ngokuHlangayo kwiNdawo yeFifth Avenue
Ukulinganisa kwe-Super Bowl ye-LIV bonisa imiqondiso yoBomi phakathi kweDip yeminyaka emininzi
kutheni abantu behlekisa nge-nickelback
isenzo sokuthintela ukuhamba kwabanqolobi
ukujonga njani inombolo yefowuni mahala
Ungabanjiswa njani sisigidi seedola
Imfihlo kaJulia roberts emehlweni abo
umthetho kunye nomyalelo: icandelo lamaxhoba akhethekileyo isizini 18 isiqendu 16